China Universal Set-top Box Ubude bethuba mveliso kunye nabenzi | Zeno
I-Q08, iisheyibhile zoLwandle eziDibeneyo kwiinkqubo zokuzonwabisa zasekhaya zigcina izixhobo kunye nezixhobo zisemhlabeni.I-5mm yeGlass enomsindo ixhasa ukuya kuthi ga kwi-22 lbs, ilungele ukubamba abadlali beDVD, izixhobo zokusasaza, izixhobo zomdlalo ezincinci, izixhobo zomsindo.
IProfayile emncinci igcina indawo kwaye isebenza ngokugqwesileyo ngescreen esineflethi encinci
Ukufakwa ngokulula kunye neNdibano enemiyalelo kunye nezixhobo ezibandakanyiweyo ukuze ishelfu yakho inyuswe (Ayikulungelanga ukunyusa i-drywall yodwa!)
Konyusa umboniso wakho ngale shelufu yodonga, iphrofayili iphantsi elungele ulungiselelo lwasekhaya lokhetho. Ishelfu ye-14 "x 10" yenziwe ngeglasi eyomeleleyo enobushushu kunye nobunzima be-22 lbs. Ngokwesiqhelo ibekwe phantsi kweTV, le shelufu idadayo yenzelwe ukubamba abadlali beDVD, izixhobo zokusasaza, izixhobo zokudlala, izixhobo zomsindo, nokunye okuninzi. Iprofayile ebhityileyo isebenza kakuhle kakhulu kwi-TV yescreen esineflethi.
Nika iziko lakho lokuzonwabisa ukucoceka, okwangoku kwaneshelufu yodonga edadayo. Uyilelwe ukuba ube nokubonwabisa kwaye womelele, le mveliso iya kugcina izixhobo zakho kwindawo ekhuselekileyo nefanelekileyo.
Umphezulu weglasi ocoliweyo unika imbonakalo entle kwaye udibana kakuhle namaziko ohlukeneyo okuzonwabisa kunye neendlela zokuhombisa.
Yonwabela indibano elula kunye nofakelo nazo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nemiyalelo yenyathelo nenyathelo yokufumana iyunithi yeshelfu yakho edadayo ifakelwe ngaphandle kwexesha!
1. Ixhasa ubuninzi be-8KG kwishelufa nganye
2. Iishelufa zeglasi eziManyeneyo eziNkulu (380 x 280mm x 5mm kwishelufa ngalinye)
3. Abadlali beDVD / iBlu-Ray, iSatellite / iibhokisi zeKheyibhile, iiConsole zeMidlalo, iiHi-Fi kunye nezithethi ezingqonge
Inkqubo yoLawulo lweeCable ukufihla zonke iintambo zakho ezimdaka
5. Kulula ukusebenzisa incwadana yemiyalelo yokukhawulezisa okulula nokukhawulezayo ngezixhobo ezifakiweyo
Ubungakanani beGlasi 345x245mm
Ingena: Abadlali beDVD bonke
Ukulayisha amandla 10kg
Ibhokisi engaphakathi: 36.5 * 25.8 * 5cm
iiPC / iCarton Iifayile ezili-10
Ibhokisi engaphandle: 50 * 38 * 27.8cm
Egqithileyo Ukubeka iliso kwidesika ye-DS90
Okulandelayo: Iprojekti Mounts T218 / W.